काठमाडौं । तेस्रो पटक नेपालमा हुन लागेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता ‘साग’को तयारी पूरा भएको छ । सागको उद्घाटन काठमाडौंमा आज हुँदैछ ।दक्षिण एसियाली खेलकुदको सबैभन्दा ठुलो खेल महोत्सवको साँ...
साग: महिला भलिबलमा नेपाल श्रीलंकासँग भिड्दै
काठमाडौं । नेपालमा जारी १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) अन्तर्गत महिला भलिबलमा शनिबार हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा नेपाल र श्रीलंकाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा हु...
आर्सनल युरोपा लिग फुटबलमा पराजित
एजेन्सी । बिहिबार राति भएको युरोपा लिग फुटबलमा प्रिमियर लिग क्लब आर्सनल पराजित भएको छ । उक्त खेलमा आर्सनल जर्मन क्लब आईन्ट्याच फ्रान्कफर्टसँग २–१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो । खेलमा सुरुआती अग्रता भने...
साग: बंगलादेशलाई हराएको नेपालले आज भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
काठमाडौं । १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुल (साग) मा भाग लिन नेपाल आइपुगेको भारतीय महिला भलिबल टोलीले आज नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । प्रतियोगितामा सहभागी हुने या नहुने भन्ने अन्योलता चिर्दै भारतीय महिला ...
नेपोलीसँग बराबरी खेल्दै लिभरपुल
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा साविकको विजेता टोली लिभरपुलले नेपोलीसँग १-१ गोल अन्तरको बराबरी खेल खेलेको छ । यस खेलसँगै लिभरपुलले नकआउट चरणमा पुग्न अझै एक खेलको नतिजा कुर्नुपर्ने हुन्छ । यो बराबर...
राष्ट्रिय महिला भलिबल टिम सम्मानित
काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला भलिबल टिम सम्मानित भएको छ । बंगलादेशमा भएको एभिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप विजेता भएपछि सरकारले महिला खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गरिएको हो । मंगलबार खेलाडीलाई...
काठमाडौं । दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)को उद्घाटन हुन ६ दिन बाँकी छ । काठमाडौंको एक मात्र दशरथ रंगशालाको पूनर्निमाण भने अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । वि.स. २०७२ को भूकम्प पश्चात चर्किएको रगशालाको निर्म...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरामी भएपछि डा. अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का खेलाडीलाई विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन् । मंगलबार प्रज्ञा भवनमा हुने कार्यक्रममा उनल...
एजेन्सी । शुक्रबार भएको अन्तराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा अर्जेन्टिनाले ब्राजिललाई पराजित गरेको छ । गएराति भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले ब्राजिललाई १-० गोल अन्तरले हराएको हो । साउदी अरेबियामा भएको खेल...
एजेन्सी । स्पेनका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चर्चित स्ट्राइकर डेभिड भिल्लाले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । ३७ वर्षीय भिल्लाले बुधबार सन्यासको घोषणा गरेका हुन् । भिल्ला स्पेनका लागि सबैभन्दा बढी...
काठमाडौं । भारतीय चर्चित पूर्व क्रिकेट खेलाडी सचिन तेन्दुलकर नेपाल आउने भएका छन । युनिसेफको पोषण सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रममा सहभागी हुनका सचिन नेपाल आउने भएका हुन । युनिसेफको सदभावना दूत रहेका सचिन...
काठमाडौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक तालिकाअनुसार उद्घाटनअघिनै भलिबलका खेलहरु सुरु हुने भएका छन् । तालिकाअनुसार मंसिर ११ देखि १७ गतेसम्म ...
कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ९ सुन्द्रावतीका जगनाथ पकुवालको होलटमा शुद्ध दूध पिउनेहरुको संख्या बढ्दो छ । सुन्द्रावतीकै कटुवाचौर बजारमा खाजा र नास्ताका लागि धेरैको रोजाइमा पर्ने पकुवाल होटलमा केही वर्...
काठमाडौं । चितवन जिल्ला फुटबल संघको सह आयोजना तथा विकास शिल्ड समितिको सहयोगमा संचालन भएको “टुबोर्ग जेसीज विकास रनिङ शिल्ड राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता २०७६” मा नेपाल प्रहरीको पुरुष फुटबल टिम प्रथम भए...